YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, January 26
26 Jan ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/u3ezvqf 26 Jan 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/26/20100အကြံပြုခြင်း
Tuesday, 26 January 2010 13:33 ဗထူး
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ညွှန်ကြားချက်အရ ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါက မည်သို့ခြေမှုန်းမည်ကို တပ်နယ်အသီးသီးကို ညွှန်ကြားထားသည်။“ပြည်သူ့စစ်၊ အရံမီးသတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ယနေ့မှစ၍ အသင့်အနေအထားနေရန် ကြက်ခြေနီ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး စသည့် အင်အားများ တပ်နယ်အသီးသီးသို့ ပေးပို့ရန် ပြောထားပြီးပြီ” ဟု ပြောသည်။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်တွေမှာ အပြောင်းအလဲရှိလိမ့်မည်လို့ မြင်တယ်။ တပ်ရင်းတွေအားလုံး လုံခြုံရေး အသေအချာ ဂရုစိုက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားသည်။လာမည့် လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံး ဒီပုံစံအတိုင်းပဲလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။
မြန်မာ၊အန်ဂိုလာ၊ဆိုမာလီယာ နှင့် မြောက်ကိုရီးယား တို့ လည်းရှိပါသေး၏ ။
ဆဒမ်၏၀မ်းကွဲညီဖြစ်သူ ကာဒ်လူမျိုးငါးထောင်ကျော်ကို အဆိပ်ငွေ့ဖြစ် သတ်ခဲ့သည့် ဓါတုအလီကို ကြိုးပေးကွက်မျက်
January 26, 2010 Freedom News Group
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တရားခံ ဓာတုအလီက ကြိုးစင်ပေါ်တက်ခါနီးတွင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ သုံး
သည်မှာ မိမိတစ်ဦး တည်းမဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ၊အန်ဂိုလာ၊ဆိုမာလီယာ နှင့် မြောက်ကိုရီးယား
တို့ လည်းရှိပါသေး၏ ဟု ပြောသွားခဲ့သည်။(အကျယ်-အယ်(လ)အာရေးကီးယားရှု)
1998 ခုနှစ်က ကဒ်လူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအား သတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့မှုဖြင့် ကြိုးမိန့် လေးကြိမ်အပေးခံရသည့် ဓာတုအလီကို ကြိုးစင်ပေါ်တက်ခါနီးတွင် တွေ့ ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - အယ်အာရာကီယား အီရတ်ရုပ်သံ
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊စစ်ဦးစီးချုပ်၊အီရတ်ထောက်လှမ်းညွှန်ချုပ်တာဝန် များထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဆက်ဒမ်ဟူစိန် ၏ ညီဖြစ်သူ ဓာတုအလီ ခေါ် အလီဟက်ဆန်အယ်(လ)ဂျာမစ်အားကြိုပေးသတ်နေပုံ
ဓာတုအလီအားကြိုးပေးနေသည်ကို အားရ၀မ်းသာကြည့်ရှုနေသည့် အီရတ်ပြည်သူတစ်ဦး
ဗိုလ်ထက်မင်း | အင်္ဂါနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၄၃ မိနစ်
Voice of Burma (Jan 24 Issue)
စာမျက်နှာ ၅၆ မျက်နှာပါရှိသော အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ နိုင်ငံ၏ အရှေ့  မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသများတွင် လွန်ခဲ့သည့် ၃နှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု အလျှင်အမြန် တိုးတက်များပြား လာနေကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ပလောင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး(PWO)၏ အဆိပ်သင့်တောင်တန်းများအမည်ရှိ အစီရင်ခံစာတွင် မန်တုန်နှင့် နမ့်ခမ်းမြို့ နယ်များရှိ ဘိန်းစိုက်ပျိုးရာ နေရာများသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း ၅ဆမျှတိုးတက်လာပြီး ဧရိယာ ၅၄၀၀ ဟက်တာရှိကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများမှာ နှစ်စဉ် ထုန်ပြန်လေ့ရှိသော ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရုံး(UNODC) ၏ နှစ်စဉ်ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု စစ်တမ်းကောက်ယူမှု ခန့်မှန်းချက်ထက် လွန်စွာများပြားနေကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်။
ပလောင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ဗဟိုကော်မီတီဝင် လိုည်းအေးနန်းက “အမျိုးသားတွေက ဘိန်းရှုတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတယ်၊ ကျမတို့အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးကဘာဖြစ်လို့ ဒီအစီရင်ခံစာကို သုတေသနပြုပြီးတော့ ထုတ်ရသလဲဆိုရင်၊ အဲဒီယောက်ျားတွေဘိန်းစွဲ၊မူးယစ်ဆေးစွဲတဲ့ ဒဏ်ကိုခံရတာက အမျိုးးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ မိခင်တွေ၊ အဒေါ်တွေ၊ အစ်မတွေ၊ ညီမတွေ၊ ဇနီးမယားတွေပဲ ခံရပါတယ်၊ ဘိန်းစွဲတဲ့လူဟာ ထမင်းဆာတာနဲ့မတူဘူးလေ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ဘိန်းရှုကိုရှုရမှဖြစ်တာ၊ သူတို့ ဘိန်းရှုချိန်ရောက်လို့ မရှုရရင် မိန်းမတွေကို နှိပ်စက်မယ်၊ အမျိုးမျိုးပေါ့နော်။ စကားဝိုင်းတွေ ထိုင်လိုက်တိုင်း အမျိုးသမီးတွေ ခံစားနေရတဲ့ အသံမျိုးစုံကိုပဲ ကျမတို့ ကြားသိနေရလို့ ဒီလို အစီရင်ခံစာ ထုတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ”ဟု ပြောသည်။ ယခုထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်းများမှာ ဒေသတွင်း ပလောင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံးအဖွဲ့ ဝင်များက စနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် အချိန်ယူပြီး စာရင်းကောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက်ခိုင်လုံကြောင်း လိုည်းအေးနန်းက ရှင်းပြသည်။ မန်းတုန်မြို့ နယ် ကျေးရွာတစ်ရွာတွင် ဆန်းစစ်လေ့လာချက်အရ အသက် ၁၅နှစ်အထက် လူငယ်နှင့် ယောက်ျား ၈၅ ရာခိုင်နုန်းတို့ မှာ ဘိန်း(သို့ မဟုတ်)ဘိန်းဖြူ စွဲနေကြကြောင်း၊ မူးယစ်ဆေးစွဲနေသူကိုမှ မယူလျှင် အိမ်ထောင်ပြုဖက် မရှိတော့ကြောင်း၊ လူတိုင်းနီးပါး မူးယစ်ဆေးဝါး စွဲနေကြသဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းရှိ သံဃာတော်များသာ ကျန်တော့သည်။
ရမခ တိုင်းအခြေစိုက် လားရှိူးမြို့တွင် တပ်မိသားစုများပန်ကြားလွှာနှင့်လှူံ့ဆော်စာကပ်
http://ifile.it/bun3w4qSPDC Troops Movement in Lashio
UNHCR နှင့် အမေရိကန်တို့ လက်အောက်က “နို့ဘိုး” ဒုက္ခသည်များ
http://ifile.it/hyl5wucThe Situation of Burmese Refugees in Thailand
လူ့အခွင့်အရေး မြန်မာကွန်ယက်၏ တိုက်တွန်းချက်
http://ifile.it/wagfcq3Statement No.1_2010 of BNHR
Must Declare Burmese Junta’s 2008 Constitution as NULL and VOID
Global Action for Burma (GAB) today calls for United Nations Security Council (UNSC) to declare the unilaterally adopted Burmese junta's 2008 sham constitution, which is designed to legitimize military rule permanently in Burma, as NULL and VOID.
The very junta who is ruling the country held the election in 1990 in which Aung San Suu Kyi’s party, National League for Democracy (NLD) won landslide victory but until now the results are still yet to be honored. Instead of honoring the elections of 1990 results, junta drafted the constitution unilaterally which legitimize the military rule in Burma and now again planning to hold sham election in 2010.
Aung San Suu Kyi and her party the National League for Democracy (NLD), the unanimous victors of the 1990 election, clearly stated their position in the “Shwe- Gone-Dine” Declaration that need to place in order to have true national reconciliation i.e. to Review 2008 Constitution and to recognize 1990 election result.
Junta has been ignoring the voices people of Burma and going ahead unilaterally to entrench military dictatorship in Burma permanently. The junta’s planned 2010 election is onlyacharade designed to legitimize the military dictatorship within Burma.
Before we could possible address the junta’s proposed 2010 election we must address the validity of the recently adapted constitution. Drafted by the junta, this document is far from credible or constitutional. Free, fair and all inclusive is not what this document represents.
The International Community should be aware of the hopelessly irreconcilable contents of the constitution that was adopted in 2008. The referendum was ushered into existence under questionable conditions including extortion and rigged ballots.
The essence of the 2008 Constitution is to guarantee impunity indefinitely and the 2010 election will implement it. Therefore, we call for United Nations Security Council (UNSC) to declare the unilaterally adopted Burmese junta's 2008 sham constitution, which is designed to legitimize military rule permanently in Burma, as NULL and VOID.
It is reasonable to request the nullification of the 2008 Constitution by the UN Security Council. Precedence for suchamove can be found in UNSC Resolution 554 regarding South Africa’s 1983 apartheid-entrenching constitution1.
1UNSC Res 554 (15 November 1983) UN Doc A/RES/38/11.
1. UNSC declares that the so-called "new constitution" is contrary to the principles of the Charter of the United Nations, that the results of the referendum of2November 1983 are of no validity whatsoever and that the enforcement of the "new constitution" will further aggravate the already explosive situation prevailing inside apartheid South Africa.
2. Strongly rejects and declares as null and void the so-called "new constitution" and the "elections" to be organized in the current month of August for the "colored" people and people of Asian origin as well as all insidious maneuvers by the racist minority regime of South Africa further to entrench white minority rule and apartheid.
Mr. Myo Thein, Global Action for Burma
(+44) 208 493 9137
Col. Sai Myo Win Htun, Global Action for Burma
(+66) 835 82 3490
Mr. Ko Ko Aung, Global Action for Burma
(+81) 090 1506 2893
Mr. Htun Htun, Global Action for Burma
(+1) 501 334 9997
Mr. Sai, Global Action for Burma
(+1) 510 415 2289
Global Action for Burma (GAB) http://www.gabforburma.info/
မြန်မာ၊အန်ဂိုလာ၊ဆိုမာလီယာ နှင့် မြောက်ကိုရီးယား တိ...
ရမခ တိုင်းအခြေစိုက် လားရှိူးမြို့တွင် တပ်မိသားစုမျ...
UNHCR နှင့် အမေရိကန်တို့ လက်အောက်က “နို့ဘိုး” ဒုက္ခ...
Must Declare Burmese Junta’s 2008 Constitution as ...